Ukuphupha ngokuhlola ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kumaxesha angaphambili, igama elithi "scouts boy" eneneni lalibhekisa kubantu abancedileyo ukufumana indlela eyiyo kwiindawo ezininzi ezingahambekiyo. Ke le nto ibenze abantu bakumkhondo olungileyo ukuba bafike kwindawo yabo ngokukhuselekileyo. Namhlanje, ngescout sithetha ilungu lombutho wescout. Injongo yale ntshukumo kukukhuthaza ukukhula kwabantu abancinci ukuze babe yinxalenye ebalulekileyo yoluntu kwaye bathathe uxanduva.
1 Uphawu lwephupha «Umfana oKhangela» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Umfana oKhangela» - Ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Umfana oKhangela» - Ukutolikwa kokomoya
Uphawu lwephupha «Umfana oKhangela» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ngaphakathi ekutolikeni ngokubanzi kwamaphupha, iscout senkwenkwe sichazwa ngokuqinisekileyo njengesimboli sephupha. Kuba ukuba olu phawu luphupha luyavela ephupheni, ufuna ukuphupha kwi indlela eyiyo yalatha ku el mundo ukuvuka. Kule meko, uphawu lwephupha "i-Boy Scout" luhlala lubonwa emaphupheni xa umntu eneemvakalelo zokuvuka ebomini ukuba ulahlekelwe yindlela elungileyo ebomini. Okanye kukho izigqibo ezibalulekileyo ekufuneka zenziwe kwilizwe eliphaphamileyo eliya kuba nefuthe elibonakalayo kubomi basemva kobomi. Kule meko, umphandi unokubonelela ngemikhondo ebalulekileyo ephupheni.
Ukubona komphandi kwiphupha nako ukululekaMusa ukuphambuka kwindlela elungileyo. Akufanele ichaphazele iimpembelelo zangaphandle izenzo ezimbi khohliswa. Ukuba enye yinkwenkwe ephuphayo ephupheni, kufuneka ifune ithamsanqa ngasese ngokokutolika kwephupha. Kuba kulapho uyakuyifumana khona. Kwakhona, ukuphupha akufuneki kubonise ithamsanqa lakho kwihlabathi elivukayo ngokucaphukisayo. Kuphela kuxhokonxa umona nengqumbo yabanye abantu. Ukuba iphupha lifuna ukwamkelwa ephupheni lakho kunye nabaphandi, kufanele kuthathelwe ingqalelo ngokubanzi ukuba ungathanda ukuthatha uxanduva kwezentlalo ekuvukeni ubomi.
Uphawu lwephupha «Umfana oKhangela» - Ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yamaphupha kutolika uphawu "lwevulandlela" njengophawu lwe Akukho zingqondweni. Oku kukubonisa iphupha lokuba kufuneka unamathele kwindlela yakho yobomi, kunye nakwimilinganiselo yokuziphatha kwilizwe lokuvuka. Akufanele uchukunyiswe ngabanye abantu ukuba benze ububi okanye ukunganyaniseki, kuba oko kuya kuzenzakalisa. Ukuba isimboli yephupha "inkwenkwe ekhangela" ibonakala njengesikhokelo ephupheni, ufuna ukubuyisela iphupha kwindlela elungileyo kwilizwe elivukayo. Kungenxa yokuba iphupha lilahlekile ebomini bokuvuka kwaye ngoku kufuneka lifumane indlela yalo yokubuyela kwindlela eyiyo yobomi.
Uphawu lwephupha «Umfana oKhangela» - Ukutolikwa kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, isimboli yephupha i "Boy Scout" inika umkhondo wokuba yeyiphi ulwalathiso lokomoya ubomi bamaphupha bungatyhileka.